Mid kamid ah G/ ku xigeenada Maamulka G/ Banaadir oo lasoo baxay Awood lama filaan ah Xog Culus!
Sunday June 24, 2018 - 01:53:39 in Wararka by Warqabadka Koonfurta soomaaliya
Warar hoose oo aan ka heleyno ilo ka tirsan Masuuliyiinta Maamulka Gobalka Banaadir ayaa sheegaya in Gudoomiye ku xigeenka Maamulka & Maaliyada Gobalka Banaadir Xuseen Maxamed Nuur, uu caburiyay xubnaha Maamulka Gobalka Banaadir.
Ilo wareedka aan xogtaan ka helnay ayaa ku waramaya inGudoomiye ku xigeenka Maamulka & Maaliyada Gobalka Banaadir oo ku heyb ah Ra’isul wasaaraha Xukuumada Somalia Xasan Kheyre uu yahay shaqsi meesha u fadhiya si dhowna ula socda dhaqdhaqaaqa Masuuliyiinta Maamulka Gobalka Banaadir qof walba oo isku daya in uu lacag la baxo oo Maamulka kamid ahna ku xujeeya in R/wasaaraha uu warqad fasaxa kala yimaado.
Gudoomiye ku xigeenka Maamulka & Maaliyada Gobalka Banaadir ayaa si toosa ugu sheega Masuuliyiinta kale ee Maamulka Gobalka Banaadir in R/wasaare Khayre Amray in shaqsi aan fasax ka haysan uusan la baxi karin wax lacag ah , waxaana Arrintaas ka masuula oo awood dheeriya siiyay Ra’isul wasaaraha Xukuumada Somalia Xasan Kheyre waloow lagu eedeyo in dhaqaalaha Gobalka Banaadir ka soo baxo isaga si gaara ugu tagri falo.
Xuseen Maxamed Nuur ayaa horey usoo noqday ku-xigeenka dhinaca maamulka Isbitaalka Erdogan (Ex-Digfeer), intii- aan xilkaan loo dhiibin waana shaqsi af gaaban kuna fiican maareynta Maaliyada.